कुन पा’पीले अ’पहरण गर्‍यो डिग्री पढ्न लागेकी एउटा गरिब परिवारकि छोरीलाई ! बिचरा ! (भिडियो हेर्नुस्) – Complete Nepali News Portal
कुन पा’पीले अ’पहरण गर्‍यो डिग्री पढ्न लागेकी एउटा गरिब परिवारकि छोरीलाई ! बिचरा ! (भिडियो हेर्नुस्)
चितवनको राप्तीनगर नगरपालिका वडा नं.३,प्रगतीनगर कि २३ वर्षीय सुजिता भण्डारी अ’पहरण परेकी छिन्। उनी एक सामान्य खेती किसानी परीवारकि छोरी जो भर्खरै ब्याचलर सकेर मास्टर्स पढ्ने तयारीमा थिइन्।
त्यो दिन उनको घरमा रोपाइँ थियो। एका बिहानै साढेँ छ बजे साथीले तरकारीन किन्न बोलाएपछी उनी घरबाट निस्केकी थिइन् । सुजिताले आफू अ’पह’रण’मा परेको खबर दिउँसोको १२ बजे आफ्नो दिदीलाई फोन गरेर भनिन्,दिदी म अप’हर’णमा परेँ।
२३ वर्षीय सुजिताको यो खबर सुन्नेबित्तिकै सबैजना चि’च्याउन थाले। सुजिता सरल सुशील र उनको शरीर देख्दा लोभलाग्दो भएको हुनाल उनि ब’लाकृ’त त हुने होइनिन कि मा’रिने त होइनिन भनि यस घ’टना’ले चितवन बासी लगायत सम्पूर्णलाई यतिबेला त्र’सित बनाइरहेको छ।
घरपरिवारलाई विस्तृत कुरा थाहा नभएपनी सुजिता अ’पह’रण’मा परेको खवर आएदेखी अत्यन्तै चि’न्तित भैरहेका छन् । उनलाई किन,कसरी र कोद्वारा,के उद्धेश्यका साथ अ’पह’र’ण’मा परिन् त्यो कसैलाई थाहा नै छैन ।
न त उनीलाई कसैले ज’ब’र्ज’स्त प्रेम सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा लग्यो न त अन्य कुनै कारणले उनी अ’प’हर’णमा परिन् केही भन्न सकिने अवस्था छैन। उनी सुजिता भण्डारीको घरमा गएर रो’इर’हेकी उनकी आमा लाई र उनको भाइलाई केही सोधपुछ गर्दा आआफ्नो छोरि प्रति केहि थाहा नभएको कुरा गरिन।
उनले ए’क्कासि आफ्नो दिदीलाई फोन गरेर दिदी मलाई जसरी पनि ब’चा’उनुस् भन्दै आ’त्तिएर फोन गरेकी थिइन्।न त कसैले उनलाई फि’रौ’ती भन्दै अ’प’हर’ण गरेको छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन।